Saaxiib kale oo caruurnimadiisu tahay Amiir Andrew: wadaadka iskuulka - dadka - WAAJIBAAD KU SAMEE
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE »Saaxiibkiis kale oo carruurnimada u ah Amiir Andrew: waa wadaadka dugsiga - dadka
Cod-bixiyeyaasha waxay soo saareen Amiir Andrew sida boqorka boqortooyada ugu caansan; waxaa lagu yaqaanaa inuu yahay qallafsan is-dhexdhexaad ah iyo dhago la 'cambaareyn. Xitaa tayada wanaagsan ee loo nisbeeyay isaga - daacada - had iyo goor waxay u keentay dhibaato, gaar ahaan markii uu doonayo inuu la sii joogo Jeffrey Epstein.
Xaqiiqdii, Andrew wuxuu ku dhegan yahay Epstein, oo maanta dhintay, xitaa ka dib markii milyaneerka. Maalgeliye ayaa markii hore baaris loogu sameeyay ka ganacsiga galmada oo waxaa lagu helay dambi ah inuu weydiistay cunug yar 2008.
Amiir Andrew, Duke of York, iyo dembiile jinsi oo la xukumay, Jeffrey Epstein. (Sawirro laga soo qaaday Getty Images iyo Xafiiska Sheriff ee Degmada Palm Beach)
"Waxaad tahay reer reer Puritan," ayuu Andrew ku yidhi saaxiibkiis oo ku boorriyay inuu xidhiidhka u jaro Epstein, sida laga soo xigtay warbixin 2011 ah oo ka socota Vanity Fair . Iska daa. Jeffrey waa saaxiibkey. In qofku aamin u noqdo saaxiibbadiis waa wanaag. Oo anigu isagaan aamin u ahaan doonaa "
Waxaa soo baxday in dambiile galmoodka diiwaangashan ee Epstein uusan aheyn saaxibka dheer ee Andrew ee lagu soo oogay dambiyo galmo la xiriira da 'yarta. Warbixin baaritaan 2017 Majaladda Canadian-ka ah ee Maclean waxay muujineysaa in Duke of York sidoo kale uu daacad u ahaa wadaad Anglican ah oo wadaad u ahaa ardey dhigta iskuulka diyaarinta ee uu horey u dhiganayay afartan sano kahor.
. Wadaadkan, Keith Gleed, ayaa markii dambe lagu soo oogay ugu yaraan shan arday oo hore oo galmood u lahaa 1974 Iskuul ku yaal Lakefield ee 1980 oo ku yaallay wakhtigii Andrew uu ahaa. dugsiga.
Wadaadka caruurnimada ah ee ku xadgudbay galmada ugu yaraan shan wiil oo caan ah oo ka socda Dugsiga Sare ee Lakefield, ayaa @mfriscolanti https://t.co/omMttE4ZUK
- Majlean Majlean (@macleans) 13 Oktoobar 2017
Axaadiista Andrew ee Gleed munaasabad ka dhacday Lakefield 2008 ayaa dhalisay in qalinjabiyeyaasha si faahfaahsan loogu eedeeyo xadgudubka ay qarsadeen, ayay tiri Maclean's.
Andre w wuxuu yimid Lakefield ee 2008 si uu u keeno farriimaha gacanta lagu sawiray ee foornada loogu talagalay kaniisadda dugsiga, Maclean ayaa yidhi. Boliiska waxaa lagu xardhay dhagax weyn hooyadii Balmoral Castle ee Scotland. Intii lagu gudajiray xafladda barakeysan, Andrew iyo kuwa kaleba waxay si xoogleh u xusuusteen Gleed inuu yahay "aaminidda dhibaatooyinka, ugaarsiga booliiska iyo saaxiib run ah".
Laakiin wuxuu ku dhintey 2001, Gleed wuxuu ahaa wax uun difaac iyo “saaxiib run ah” u leh wiilasha qaar ee Lakefield, sida laga soo xigtay Maclean's. "Wuxuu ahaa caruurnimo ku xadgudbay ardayda jilicsan oo u horseeday sirtiisa qabriga," ayuu yidhi Maclean's.
Dacwad ay gudbiyeen labo ka mid ah dhibbanayaashii Gleed ee la sheegay, nin ayaa sheegay inuu "xanaaqay isla markaana uu dhib ku haystay ilmaha agoonta ah maadaama aabihiis Keith si joogto ah loogu sharfayo farriinta baabtiiska ee dhismaha dugsiga," sida laga soo xigtay Maclean iyo goobta wararka maxalliga ah Mykawartha.com
Dhibbanaha la soo eedeeyay, oo u aqoonsaday Maclean's iyo Mykawartha inuu yahay Gregory, wuxuu sheegay in aqrinta Andrew ee ku sharfaya Gleed dabeecadda booliisku ay aad uga xumaatay. "Waxay xoojisay aaminsanaanteyda inaan qofna i rumeysan doonin, in wax aan yarayn ahay iyo in xadgudubyadii laygu qaadi lahaa aan macno lahayn," ayuu yidhi.
Isaga difaaceed dacwadaha, Lakefield wuxuu sheegay inuusan ogeyn. eedaha loo soo jeediyay Gleed wakhtigii uu ahaa wadaadoodu ahaa ama markii Andrew ku abaal mariyay 2008. Eedeymaha waxaa lagu faahfaahiyay dacwadaha ardayda iyo baaritaan saddexaad oo ay biloowday dugsiga dhowr sano kadib booqashadii Andrew. Baadhitaanku wuxuu ku soo gabagaboobay 2015 in wadaadka ceebta ahi uu jabiyey "aaminaada iyo awooda" ee booskiisa wuxuuna "waxyeeleeyay ardayda aan waxba galabsan isagoo ku hawlan anshax xumo galmood".
Waxay u muuqataa, si kastaba ha noqotee, in Kaniisadda Anglican ee Kanada ay ka war heshay xadgudubka Gleed kahor geeridiisa, sidaana waxaa wariyey Mykawartha.com. Kaniisaddu waxay heshay cabasho la xiriira faraxumayn horraantii 1990 sano, taas oo ku kaliftay inuu ka tanaasulo Gleed wadaaddadiisii ​​rasmiga ahayd, bogga ayaa sheegay.
Andrew, isagoo maraya Buckingham Palace, wuxuu diiday inuu ka hadlo eedeymaha loo soo jeediyay Gleed markii lala xiriiray. waxaa qoray Maclean's 2017.
Laba sano kadib, Andrew iyo qoyska boqortooyada ayaa ku dhex dhacay fadeexad la xiriirta saaxiibtinimadii Duke ee Epstein, kaasoo sii socday ilaa ugu yaraan dhamaadka 2010. Dembiiluhu diiwaangashanaa ayaa ku dhintey is-dilistii Agoosto 10 isagoo ku sugnaa xabsi ku yaal Manhattan halkaas oo uu sugayay maxkamad si loogu soo oogo eedeymo dheeri ah oo ku saabsan tahriibinta galmada.
Fadeexadda Epstein ayaa dad badan ku dishay dadweynaha Ingiriiska iyo warbaahinta iyagoo muujinaya xanaaqooda iyo sida ay ugu qanacsan yihiin faallooyinka Andrew ee gaagaaban, taasoo ah inuusan ka warqabin dambiyada lagu soo eedeeyay maal-galiyaha. oo beenisay galmo mid ka mid ah waxa loogu yeero "addoomayaasha galmada". Virginia Roberts Giuffre ayaa ku sheegtay wareysi 2011 iyo dacwad 2015 ah in lagu qasbay Epste.
Ka baxsan qolka maxkamadda Manhattan bishii hore, Giuffre ayuu u sheegay saxaafadda Andrew wuu ogaa sida saxda ah ee uu u qabtay waxaan rajeynayaa inuusan waxba ka fahmin waxa ku saabsan. . "
Hay'adaha samafalka qaarkood oo uu Andrew mas'uul ka yahay doonayay inuu ka soo baxo digaag. Amiir Charles xanaaqi lahaa maxaa yeelay walaalkiis ka yar, oo ah safka sideedaad ee Boqortooyada Ingiriiska, ayaa qoyska u horseeday waalinimadiisa Epstein, ayuu qoray wargayska Vanity Fair.
Aayado laga xishoodo on Andrew martiqaad Epstein inuu joogo Balmoral Castle ee 1999 oo uu ka qeyb galo dhalashada Windsor Castle isaga iyo Amiir William 2000 iyo Princess Beatrice ee 2006.
Waxay umuuqataa, si kastaba ha noqotee, in Boqortooyada Royal ay si rasmi ah ugu xayiran tahay Andrew, Queen Elizabeth oo u oggolaaneysa in mar kale la sawiro iyada Axadda, iyadoo ku fuushan baabuurka gadaashiisa kaniisadda u dhow Balmoral Castle , sida lagu sheegay Daily Mail. Andrew waa sida muuqata wiilkiisa Elizabeth. Boqoraddu waxay sameysay tilmaam la mid ah tan wiilkeeda maalin ka dib dhimashadii Epstein
Amiir Andrew wuxuu ku biirayaa boqoradda ENCORE adeegga Balmoral Sunday https://t.co/CPt1atDr7D  - Daily Mail UK (@DailyMailUK) 15 September 2019
Dhanka kale, reerka boqortooyadu kuma soo daabicin akoonkooda warbaahinta bulshada wax sawirro ah ama war ah oo ku saabsan Andrew intii uu ku guda jiray howlihiisa rasmiga ah, mana ahan illaa dhammaadkii Agoosto, markii dhigata rejista boqortooyada gudaha Devon. Boggiisa twitter-ka ku saabsan Andrew ee guriga la socda ayaa martiqaaday daadad faallooyin muhiim ah.
Andrew wuxuu had iyo jeer sheegaa in lixda bilood ee uu joogay Iskuulka Lakefield uu "nolosha beddelay", ayuu yidhi Maclean's. Lakefield waa mid ka mid ah iskuulada khaaska ee ugu caansan uguna sharafta badan ee Kanada. Waxay ku kacdaa ilaa 57 000 doollar sanadkii ardayda ku nool xeradooda. Wuxuu ku dhex milmay 1989 iyo ardaydiisii ​​hore Felipe VI, King of Spain, jilaa Emmy loo magacaabay, Will Arnett, iyo siyaasiyiin badan oo Kanada ah.
Duke of York wuxuu xiriir dhaw la lahaa Lakefield. waxaa loo magacaabay madaxweynaha sharafta ee aasaaskiisa sadaqada ayaa soo sheegay Baadheyaasha Peterborough.
Andrew sidoo kale wuxuu la xiriiray Gleed, "qosol iyo khibrad leh," kaasoo si wanaagsan loogu yiqiin kambaska adeegyada subaxnimadiisa iyo doorkiisa kormeeraha guriga, ayuu yiri Maclean. Markii Andrew guursaday Sarah Ferguson ee 1986, Gleed wuxuu hogaaminayay koox ka socota Lakefield oo ka qeybgalay arooska Westminster Abbey. Andrew wuxuu sidoo kale u safray Kanada si uu u booqdo wadaadka oo ku yaal isbitaalka wax yar ka hor dhimashadiisa kansarka, 2001, "markhaati u ah saaxiibtinimada dhabta ah," sida uu sheegayo dacwada Gleed ee joornaalka iskuulka. , ayuu qoray Maclean's.
Laba ka mid ah dhibanayaashii Gleed ayaa la sheegtey dacwadaha Gleed ay la saaxiibeen oo ay dhageysteen iyagoo kahadlaya dhibaatooyinkooda guriga ama iskuulka. Dhibbanaha oo loo aqoonsaday Gregory wuxuu sheegay inuu ku jiray sannaddii 9e markii uu bilaabay inuu la kulmo Gleed. Intii lagu guda jiray booqashooyinkaas, Gleed wuxuu siiyay sherry oo inta badan gacmihiisa ku qaado oo madaxiisa ku dhuftay. Kulankoodii ugu dambeeyay, Gregory wuxuu sheegay inuu dhulka ka toosay, isagoo murugoonaya, maadaama Gleed korkiisa saaran yahay. Gregory wuxuu sheegay inuu markii dambe gartay in la kufsaday, oo uu dhaawac u gaystay markii uu ku soo booday dhibaato khamri. Fikradaha isdilitaanka ayaa si joogto ah u edbiya isaga.
"Ku xadgudubka Aabaha Keith si guud ayaa loo bedelay cidda aan ahay," Gregory ayaa u sheegay Maclean's. “Wixii ka dambeeyay xadgudubka, waxaan dareensanahay inay wax khalad ah ay ila xumaadeen. Waan xishooday. Waxaan moodayay in la i eedayn doono oo cidina i rumaysan doonin. "
Dhibane kale wuxuu leeyahay Gleed wuxuu bilaabay inuu dilo isaga markuu joogay 6e sanadka. Natiijo ahaan, wuxuu soo maray dhibaatooyin dabeecadeed oo u horseeday inuu ka tago booska.
Ka dib markii uu ka tegey Lakefield, Gleed wuxuu ka shaqeeyay dhowr kaniisado Anglican ah oo ku yaal aagga Toronto
Maclean's wuxuu sheegay in xusuusqorradii uu ku deeqay Andrew laga saaray maktabadda ee 2014. Isaga oo ka jawaabaya dacwad soo oogaha, Lakefield wuu dafiray inuu si fiican u ogaa in "Aabaha Gleed loo eedeyay inuu yahay dhibbane la sheegay" kahor inta Andrew uusan soo bandhigin font baabtiisa.
Markii eedeymaha la soo gudbiyo, (iskuulkii) isla markiiba waxay dejiyeen agabkii loo baahnaa si loogu caawiyo dhibanayaasha. iyo baaritaanka saddexaad ee madax-bannaan ee ay furtay, ”ayuu yidhi iskuulku. Lakefield waxay kaloo adeegyo latalin ah siisay dhibbanayaashii hor yimid, waxay la wadaagaan macluumaadka ku saabsan eedeymaha waalidiinta iyo macallimiinta, waxayna ku dhiirigelisay dhammaan khidmooyinka inay ka qaybqaataan sahanka. "Badbaadada iyo wanaaga ardayda ayaa had iyo jeer ah ahmiyada ugu saraysa ee iskuulka"
INFO DADKA: MOM OF DJ ARAFAT BALANCE SAMUEL ETO'O
Doorashada madaxweynaha Aljeeriya: sida musharixiintu isu diyaariyeen - JeuneAfrique.com
Fatou Diome: "Shakhsiyadeena waa kuwa ku takhasusay soo jiidashada aqoonsigooda" - JeuneAfrique.com
Senegal: dhinaca ciribtirka CREI? - YoungAfrica.com
Talyaanigu si xikmad leh ayey ugu soo rogeysaa maalgashadayaasha waaweyn ee Afrika - JeuneAfrique.com
Tilmaamaha: 43 FUDUD EE KITCHEN OO KU SAABSAN CUNTADAADA XAQIIJINTAADA
DADKA & LIFESTYLE7,700